ဝက်စ်ဘရွန်း 0-4 အာဆင်နယ်ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ထင်ထင် မြင်ခဲ့ရတဲ့ အချက်7ချက် – Sports A2Z
ဝက်စ်ဘရွန်း 0-4 အာဆင်နယ်ပွဲအပြီး မှတ်မှတ်ထင်ထင် မြင်ခဲ့ရတဲ့ အချက်7ချက်
ကြည့်လို့ကောင်းနေတဲ့ အာဆင်နယ် – အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ပုံစံကို မထင်မှတ်တဲ့ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး Kick Start လို့ ခေါ်တဲ့ အလျင်အမြန် တိုးတက်မှုကို ရရှိသွားခဲ့သလို နောက်ဆုံး သုံးပွဲဆက် အနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်သလို နှစ်ပွဲက သူတို့ရဲ့ အဝေးကွင်းတွေမှာပါ။ ပထမ ၁၀ မိနစ်မှာကို နှစ်ကြိမ်ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့တာက စိတ်ပျက်နေရတဲ့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ပုံစံနဲ့ မတူတော့ဘဲ တီယာနီရဲ့ အဖွင့်ဂိုးနဲ့အတူ သူတို့တွေ အကောင်းဆုံးပုံစံကို ပြန်ရလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းလင်းတောက်ပပြန်တဲ့ ဆာကာ – အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူငယ်တောင်ပံကစားသမား ဘူကာယို ဆာကာကတော့ ညာတောင်ပံနေရာနဲ့ ဓာတ်တည့်သလို ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးအပြင် အသင်းအတွက် အများကြီး အကျိုးပြုခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဂိုးကို ဝုလ်ဗ်စ်နဲ့ ပွဲမှာ ညာတောင်ပံကနေ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆာကာကတော့ ဝီလီယန်နဲ့ ပေပေတို့ကို ဖြုတ်ချပြီး နေရာတစ်နေရာ အပိုင်ယူနိုင်ခြေများနေသလို ဒီအတွက် အသင်းမှာလည်း အကျိုးများဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
တိုက်စစ်အင်အားကို ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် – အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ဒီရာသီအစမှာ ခံစစ်က ကောင်းခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်က ဂိုးမရလို့ တစ်ဂိုးတည်းနဲ့ ကပ်ရှုံးရတာမျိုး များနေခဲ့ပြီး ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ခံစစ်ရော တိုက်စစ်ပါ ထက်မြက်လာခဲ့တာပါ။ ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲကနေ စပြီး ဒီနေ့ပွဲအထိ ၃ ပွဲမှာ ၈ ဂိုးဆိုတာကတော့ သူတို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်သလို ခြေစွမ်းပြန်ပြခဲ့တဲ့ အလက်ဇန်းဒါး လာကာဇက်ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
နားလည်မှု ပိုကောင်းပြီး တည်ငြိမ်လာတဲ့ ခံစစ် – အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကတော့ ဂါဘရီယယ်လ် ကိုဗစ်ငြိသွားခဲ့ကတည်းက ဟိုးလ်ဒင်း၊ ပါဘလို မာရီ၊ ဘယ်လာရင်၊ တီယာနီတို့ အတွဲက ပိုမိုတည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီး အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲမှာ Clean Sheet ယူခဲ့သလို ပိုကောင်းလာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ တီယာနီအနေနဲ့ တိုက်စစ်ကို ပိုကစားလာခဲ့သလို ပါဘလို မာရီကလည်း ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဂါဘရီယယ်လ် ပြန်ပါလာဖို့နဲ့ ဒေးဗစ် လူးဝစ်ဇ်တို့ကို ပြန်မသုံးတော့ဖို့ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ကယ်တင်ရှင်ကြီး နာမည်ပျက်ရတော့မလား – ဆမ် အလာဒိုက်စ်အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တန်းမဆင်းရအောင် ကယ်တင်သူအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝက်စ်ဘရွန်းနဲ့မှ သူ့မှာ နာမည်ပျက်ရတော့မှာလား မေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘော်လ်တန်၊ နယူးကာဆယ်လ်၊ ဘလက်ဘန်း၊ ဝက်စ်ဟမ်း၊ ဆန်ဒါးလန်း၊ ခရစ္စတယ်လ်ပဲလေ့စ်(အစဉ်လိုက်)တို့ကို တန်းဆင်းဇုန်ရပ်တည်မှုကနေ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ Big Sam, Fireman Sam ဟာ ဝက်စ်ဘရွန်းရဲ့ ပြိုကွဲနေတဲ့ ခံစစ်ကို တည်ဆောက်ရဦးမှာဖြစ်သလို ၄ ပွဲမှာတော့ ၁ ပွဲမှ အနိုင်မရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆာကာရဲ့ အထင်ကြီးလောက်တဲ့ မှတ်တမ်း – ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကနေ စပြီး အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမာခံ ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆာကာဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်မှု ၂၂ ကြိမ် (၇ ဂိုးသွင်း၊ ၁၅ ဂိုးဖန်တီး) ရှိခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
4 – Arsenal's 4-0 victory against West Brom was their biggest margin of victory inacompetitive away game under Mikel Arteta. Strides. pic.twitter.com/35TGoAqilU
လာကာဇက်၊ တီယာနီ၊ အာတီတာတို့ရဲ့ အဝေးကွင်းမှတ်တမ်း – ဒီပွဲကတော့ အဝေးကွင်းတွေမှာ အာဆင်နယ်အသင်း မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပါ။ တိုက်စစ်မှူး လာကာဇက်က တစ်ရာသီအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးဂိုး ၅ ဂိုးကို သူ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းအဖြစ် ရယူနိုင်ခဲ့သလို နောက်ခံလူ တီယာနီကလည်း စကော့တလန်ကစားသမားတွေထဲက ဂန်းနားတွေအတွက် ပထမဆုံးအဝေးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး နည်းပြ အာတီတာကတော့ သူ့အတွက် အဝေးကွင်းမှာ အကောင်းဆုံးရလဒ်အဖြစ် လေးဂိုး-ဂိုးမရှိ ရလဒ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ၾကည့္လို႔ေကာင္းေနတဲ့ အာဆင္နယ္ – အာဆင္နယ္အသင္းအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ ပုံစံကို မထင္မွတ္တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီး Kick Start လို႔ ေခၚတဲ့ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္မႈကို ရရွိသြားခဲ့သလို ေနာက္ဆုံး သုံးပြဲဆက္ အႏိုင္ရခဲ့တာလည္းျဖစ္သလို ႏွစ္ပြဲက သူတို႔ရဲ႕ အေဝးကြင္းေတြမွာပါ။ ပထမ ၁၀ မိနစ္မွာကို ႏွစ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ခဲ့တာက စိတ္ပ်က္ေနရတဲ့ အာဆင္နယ္ရဲ႕ ပုံစံနဲ႔ မတူေတာ့ဘဲ တီယာနီရဲ႕ အဖြင့္ဂိုးနဲ႔အတူ သူတို႔ေတြ အေကာင္းဆုံးပုံစံကို ျပန္ရလာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ထြန္းလင္းေတာက္ပျပန္တဲ့ ဆာကာ – အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ လူငယ္ေတာင္ပံကစားသမား ဘူကာယို ဆာကာကေတာ့ ညာေတာင္ပံေနရာနဲ႔ ဓာတ္တည့္သလို ဒီေန႔ပြဲမွာလည္း သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးအျပင္ အသင္းအတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးျပဳခဲ့တာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ္ဂိုးကို ဝုလ္ဗ္စ္နဲ႔ ပြဲမွာ ညာေတာင္ပံကေန ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆာကာကေတာ့ ဝီလီယန္နဲ႔ ေပေပတို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေနရာတစ္ေနရာ အပိုင္ယူႏိုင္ေျခမ်ားေနသလို ဒီအတြက္ အသင္းမွာလည္း အက်ိဳးမ်ားဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။
တိုက္စစ္အင္အားကို ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္ – အာဆင္နယ္အသင္းအေနနဲ႔ ဒီရာသီအစမွာ ခံစစ္က ေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ တိုက္စစ္က ဂိုးမရလို႔ တစ္ဂိုးတည္းနဲ႔ ကပ္ရႈံးရတာမ်ိဳး မ်ားေနခဲ့ၿပီး ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခံစစ္ေရာ တိုက္စစ္ပါ ထက္ျမက္လာခဲ့တာပါ။ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ပြဲကေန စၿပီး ဒီေန႔ပြဲအထိ ၃ ပြဲမွာ ၈ ဂိုးဆိုတာကေတာ့ သူတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မွတ္တမ္းျဖစ္သလို ေျခစြမ္းျပန္ျပခဲ့တဲ့ အလက္ဇန္းဒါး လာကာဇက္ကိုလည္း ေမ့ထားလို႔ မရပါဘူး။
နားလည္မႈ ပိုေကာင္းၿပီး တည္ၿငိမ္လာတဲ့ ခံစစ္ – အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ခံစစ္ကေတာ့ ဂါဘရီယယ္လ္ ကိုဗစ္ၿငိသြားခဲ့ကတည္းက ဟိုးလ္ဒင္း၊ ပါဘလို မာရီ၊ ဘယ္လာရင္၊ တီယာနီတို႔ အတြဲက ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာခဲ့ၿပီး အေဝးကြင္းႏွစ္ပြဲမွာ Clean Sheet ယူခဲ့သလို ပိုေကာင္းလာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ တီယာနီအေနနဲ႔ တိုက္စစ္ကို ပိုကစားလာခဲ့သလို ပါဘလို မာရီကလည္း ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ဂါဘရီယယ္လ္ ျပန္ပါလာဖို႔နဲ႔ ေဒးဗစ္ လူးဝစ္ဇ္တို႔ကို ျပန္မသုံးေတာ့ဖို႔ကိုေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ကယ္တင္ရွင္ႀကီး နာမည္ပ်က္ရေတာ့မလား – ဆမ္ အလာဒိုက္စ္အေနနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ တန္းမဆင္းရေအာင္ ကယ္တင္သူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဝက္စ္ဘ႐ြန္းနဲ႔မွ သူ႔မွာ နာမည္ပ်က္ရေတာ့မွာလား ေမးစရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဘာ္လ္တန္၊ နယူးကာဆယ္လ္၊ ဘလက္ဘန္း၊ ဝက္စ္ဟမ္း၊ ဆန္ဒါးလန္း၊ ခရစၥတယ္လ္ပဲေလ့စ္(အစဥ္လိုက္)တို႔ကို တန္းဆင္းဇုန္ရပ္တည္မႈကေန ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ Big Sam, Fireman Sam ဟာ ဝက္စ္ဘ႐ြန္းရဲ႕ ၿပိဳကြဲေနတဲ့ ခံစစ္ကို တည္ေဆာက္ရဦးမွာျဖစ္သလို ၄ ပြဲမွာေတာ့ ၁ ပြဲမွ အႏိုင္မရေသးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဆာကာရဲ႕ အထင္ႀကီးေလာက္တဲ့ မွတ္တမ္း – ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကေန စၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းအတြက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အမာခံ ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဆာကာဟာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿပိဳင္ပြဲစုံမွာ ဂိုးပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၂၂ ႀကိမ္ (၇ ဂိုးသြင္း၊ ၁၅ ဂိုးဖန္တီး) ရွိခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆုံး ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လာကာဇက္၊ တီယာနီ၊ အာတီတာတို႔ရဲ႕ အေဝးကြင္းမွတ္တမ္း – ဒီပြဲကေတာ့ အေဝးကြင္းေတြမွာ အာဆင္နယ္အသင္း မွတ္တမ္းေကာင္းေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ပြဲပါ။ တိုက္စစ္မႉး လာကာဇက္က တစ္ရာသီအတြင္း ပရီးမီးယားလိဂ္ အေဝးဂိုး ၅ ဂိုးကို သူ႔ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးမွတ္တမ္းအျဖစ္ ရယူႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ခံလူ တီယာနီကလည္း စေကာ့တလန္ကစားသမားေတြထဲက ဂန္းနားေတြအတြက္ ပထမဆုံးအေဝးဂိုးသြင္းသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီး နည္းျပ အာတီတာကေတာ့ သူ႔အတြက္ အေဝးကြင္းမွာ အေကာင္းဆုံးရလဒ္အျဖစ္ ေလးဂိုး-ဂိုးမရွိ ရလဒ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
3 Jan နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု
3 Jan နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု